UTSHINTSHA NJANI IGAMA LAKHO LOKUGQIBELA EMVA KOMTSHATO - UBOMI BOMTSHATO
Eyona Ubomi Bomtshato Utshintsha njani igama lakho lokugqibela emva komtshato
Utshintsha njani igama lakho lokugqibela emva komtshato
Zimbini iindlela onokuyenza ngazo, kwaye enye yazo super elula. I-Redfield Photography Ukuhlaziywa kwe-Oct 12, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Kungenxa yokuba une iphepha lomtshato kunye neyakhoigama elitsha lokugqibela, ayithethi ukuba unayo ngokusemthethweni utshintshe igama lakho. (Ukuba ucinga ukuba le yayiyinxalenye enzima, linda ude ubone imigca kwiofisi yokhuseleko lwentlalo kunye ne-DMV.) Kukho indlela emfutshane, nangona kunjalo: Yenze kube lula kuwe kwaye ukhawuleze ukulandelela iphepha lakho ngokugqwesa nokulula kwegama leHitchswitch ikiti.
Endaweni yokwenza ngendlela yesikolo esidala? Bona ngezantsi:
1. Fumana ilayisensi yakho yomtshato.
Ngaphambi kokuba utshintshe igama lakho, uyakufuna ilayisensi yomtshato yoqobo (okanye eqinisekisiweyo) kunye netywina eliphakanyisiweyo. Tsalela umnxeba kwi-ofisi kamabhalana apho iphepha-mvume lakho lafakwa khona ukuze ufumane ikopi ukuba ayithunyelwanga ngokuzenzekelayo kuwe.
2. Guqula ikhadi lakho loKhuseleko lweNtlalo.
Ndwendwela iwebhusayithi yoLawulo loKhuseleko loLuntu kunye gcwalisa isicelo Ikhadi elitsha loKhuseleko lweNtlalo. Uya kugcina inani elifanayo-nje igama lakho liza kwahluka. Thumela imeyile kwisicelo sakho ofisi yoLawulo loKhuseleko loLuntu , okanye yenza nje inkqubo ngelixa ulapho. Kuya kufuneka ufumane ikhadi lakho elitsha kwiintsuku ezili-10 zeshishini.
3. Guqula iphepha-mvume lakho kwi-DMV.
Thatha uhambo oluya kwiSebe lezeMoto lasekuhlaleni ukuze ufumane ilayisensi entsha enefani yakho entsha. Yiza nazo zonke iifom zokuchonga i-DMV yakho ekuyalela yona-kubandakanya ilayisensi yakho yangoku, isatifikethi sakho somtshato esiqinisekisiweyo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ikhadi lakho elitsha loKhuseleko lweNtlalo.
4. Tshintsha iiakhawunti zakho zebhanki.
Le yinto enkulu, ngakumbi ukuba useta iakhawunti yebhanki edibeneyo, okanye ukuba sele uyimisile. Eyona ndlela ikhawulezayo yokutshintsha igama lakho ebhankini kukuya kwindawo yesebe, uzise iphepha-mvume lakho lokuqhuba kunye nesiqinisekiso sakho somtshato. Kuya kufuneka ucele iitsheki ezintsha kunye neebhanki kunye namakhadi etyala ngaphezulu kokutshintsha igama eliqhotyoshelwe kwiiakhawunti zakho. Into ekufuneka uyiqaphele: Usenokubethwa yimirhumo xa ucela ikhadi elitsha ledebithi.
5. Gcwalisa izikhewu
Nje ukuba ube unekhadi loKhuseleko lweNtlalo kunye nelayisensi yokuqhuba kwigama lakho elitshatileyo, olunye utshintsho kufuneka lube lula. Ezinye iindawo zifuna umnxeba kuphela; abanye banokucela ikopi yesatifiketi sakho somtshato okanye ikhadi lokhuseleko loluntu. Qinisekisa ukwazisa:
Abaqeshi / umvuzo
-Posa iofisi (ukuba idilesi yakho itshintshile nayo)
-Electric kunye nezinye iinkampani eziluncedo
Iinkampani zamakhadi etyala
-Izikolo kunye nemibutho yealumni
-Landlord okanye inkampani yokubambisa
Iinkampani zeinshurensi (ezenzekelayo, ikhaya, ubomi)
-Ofisi yobhaliso lwabavoti
Ababoneleli ngeakhawunti yotyalo-mali
-Igqwetha lakho (ukuhlaziya amaxwebhu asemthethweni, kubandakanya nomyolelo)
-Iinqwelomoya (ukudlulisa ngaphezulu kweemayile zakho)
6. Ndiziva ndonganyelwe? Sukuhoya ezimbini ukuya kwezintlanu kwaye masincedise.
Sithembe, kukho kakhulu indlela elula yokutshintsha igama lakho ngokusemthethweni. Yiya kuTshintsho lwegama leHitchswitch, khetha iphakheji oyifunayo, kwaye ngamanyathelo ambalwa alula, onke amaphepha owadingayo athunyelwa kuwe agcwaliswe ngolwazi lwakho (oluthatha kuphela ukugcwalisa ifom enye). Le nkonzo ixabiseke kakhulu, kuba iyacutha lonke ixesha eliza kuthatha ukulandelela zonke iifom ozifunayo kwaye uzigcwalisele zona. Ayisiba lula kunoko!
Unina ka-Macy onxibe iilokhwe
iihempe zetheko lomtshato ukuze zilungele ukungena
Uphawu lwamanzi amatye
ikhabhinethi ngaphezulu kwesinki
yintoni ukufumana abazali bf yekrismesi
iilokhwe zokubeleka zeendwendwe zomtshato